Nhau dzeBhaibheri: Noa Anovaka Areka - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Noa aiva nomudzimai navakomana vatatu. Mazita avanakomana vake aiva Shemi, Hami, naJafeti. Uye ava vanakomana vaiva navadzimai. Saka mumhuri yaNoa maiva navanhu vasere.
Mwari zvino akaitisa Noa chinhu chechienzi. Akamuudza kuvaka ziareka. Areka iyi yakanga iri hombe sechikepe, asi yaioneka zvikuru sebhokisi guru, refu. ‘Iite huriri hutatu mukukwirira,’ Mwari akadaro, ‘uye ita makamuri mairi.’ Makamuri aiva aNoa nemhuri yake, mhuka, nezvokudya zvavaizoda vose.
Mwari akaudzawo Noa kunamira areka kuti mvura igorega kupinda. Mwari akati: ‘Ndichauyisa mafashamo makuru emvura ndokuparadza nyika yose. Ari wose asiri muareka achafa.’
Noa nevanakomana vake vakaterera Jehovha ndokutanga kuvaka. Asi vamwe vanhu vakangoseka havo. Vakapfuurira kuipa. Hakuna munhu aidavira Noa paaivaudza chaizoitwa naMwari.
Kuvaka areka kwakatora nguva refu nokuti yakanga yakakurisa. Pakupedzisira, pashure pamakore mazhinji, yakapera. Zvino Mwari akaudza Noa kupinza mhuka muareka. Mwari akataura kupinza mbiri mbiri dzamamwe marudzi emhuka, mukono nehadzi. Asi dzamamwe marudzi emhuka, Mwari akaudza Noa kupinza nomwe nomwe. Mwari akaudzawo Noa kupinza marudzi ose akasiyana-siyana eshiri. Noa akaita.
Pashure pacho, Noa nemhuri yake vakapindawo muareka. Ipapo Mwari akapfiga suo. Vari mukati, Noa nemhuri yake vakamirira. Chimbofunga kuti uri muareka pamwe chete navo, uchimirira. Kwaizova namafashamo zvomenemene here sokutaura kwaMwari?
Mhuri yaNoa yaiva nevanhu vangani, uye vanakomana vake vatatu vainzi vanaani?
Chinhu chipi chechienzi icho Mwari akakumbira Noa kuti aite, uye nei?
Vavakidzani vaNoa vakaita sei paakavaudza nezveareka?
Mwari akaudza Noa kuti aitei nemhuka?
Pashure pokunge Mwari avhara musuo weareka, Noa nemhuri yake vaifanira kuitei?
Verenga Genesi 6:9-22.
Chii chakaita kuti Noa ave munamati waMwari wechokwadi akasiyana zvikuru nevamwe? (Gen. 6:9, 22)
Jehovha anonzwa sei pamusoro pechisimba, uye izvi zvinofanira kutibatsira sei pazvinhu zvatinosarudza kuvaraidzwa nazvo? (Gen. 6:11, 12; Pis. 11:5)
Tingatevedzera sei Noa patinopiwa mirayiridzo kubva kusangano raJehovha? (Gen. 6:22; 1 Joh. 5:3)
Verenga Genesi 7:1-9.
Pfungwa yokuti Jehovha aiona Noa murume asina kukwana seakarurama inotikurudzira sei nhasi? (Gen. 7:1; Zvir. 10:16; Isa. 26:7)